Company Profile - Huizhou Jinhaocheng Co., Ltd
ifildi isicelo Product
Nonwoven ikhoki Enalitini-ngenqindi
Filter Nonwoven Ilaphu
Car Interior Ilaphu
Thermal kophethe Wadding- ukubetha
Spunlace Nonwoven Ilaphu
Umatrasi & izinto ezahlukahlukeneyo
Non-ephothiweyo Product Mystery
HEPA lokucoca ulwelo
Nokupakisha & Shipping
Huizhou Jinhaocheng Non-ephothiweyo Ilaphu Co., Ltd.
Huizhou Jinhaocheng Non-ephothiweyo Ilaphu Co., Ltd, leyo yasekwa ngowe-2005, isakhiwo mveliso egqume ummandla 15,000 ezikwere zeemitha, yikhemikhali ifayibha nonwovens inkampani umsebenzi imveliso yazo kwiimalike enterprise.Our usuke imveliso automated ngokupheleleyo, owawufikelela iyonke amandla emveliso yonyaka ukuya kwiitoni 6,000 kunye ngaphezu kwimveliso amashumi imigca iyonke. Elise Huiyang District, Huizhou City of kwiPhondo Guangdong, apho kukho-high speed yokunqumla ezimbini. inkampani yethu nefikeleleka zokuhamba elula kunye imizuzu engama-40 kuphela uqhuba ukusuka Shenzhen Yantian Port kunye nemizuzu engama-30 ukusuka Dongguan.
iimveliso zethu zahlulwe: Enalitini Uhlobo Series, Spunlace Series, Thermal nemali (umoya Hot ngokusebenzisa) Uthotho, Hot Rolling, izinto ezahlukahlukeneyo iimveliso Uthotho Uthotho kunye Lamination Series.Our eziphambili zezi: umbala ngemiba waziva, eziprintiweyo non-ephothiweyo, ilaphu izithuthi elingaphakathi, landscape engineering geotextile, ilaphu isiseko ikhaphethi, ingubo yombane non-ephothiweyo, usula yococeko, umqhaphu nzima, ukhuseleko ifanitshala mat, umatrasi pad, nezikhuseli ifanitshala kunye neemveliso others.These non-ephothiweyo zisetyenziswa kakhulu yaye bangena ngokunyebelezela kwiinkalo ezahlukeneyo oluntu namhlanje, ezifana njengokuba: ukhuselo lokusingqongileyo, imoto, izihlangu, ifenitshala, oomatrasi, impahla, iibhegi, izinto zokudlala, filter, ukhathalelo lwempilo, izipho, izinto zombane, izixhobo zesandi, ukwakhiwa zobunjineli namanye amashishini. Ndiyila iimpawu zemveliso, sadibana kuphela kweemfuno zangaphakathi kodwa ngaphandle Japan, Australia, mpuma Asia, eYurophu nakwezinye iindawo kwakunye unandipha igama eliphezulu evela kubaxhasi ehlabathini lonke.
umgangatho imveliso High sisiseko lweshishini yethu. Inkqubo yolawulo ngendlela yaye controllable, siye ndizuze le ISO9001: kwezatifiketi nenkqubo yolawulo lomgangatho-2008. Zonke iimveliso zethu nokusingqongileyo kunye waya FIKELELA, ucoceko PAH, AZO, nawayenxuse benzene 16P, formaldehyde, GB / T8289, EN-71, i-F-963 kunye nomgangatho BS5852 nemigangatho zovavanyo nokuthintela ilangatye nekudodobalisa lomlilo yaseBritani. Ukongeza, iimveliso zethu kwakhona silandele RoHS nemigangatho OEKO-100.
Ukuze kugcinwe ukhuphiswano iimveliso, inkampani yethu byi ingqalelo elikhulu uphando kunye nophuhliso lweemveliso ezintsha, ngokukodwa kumisa isebe R & D, kwaye axhotyiswe izixhobo phambili kwakunye nabasebenzi engqongqo, zinjalo, zobungcali, kunye nobugcisa. Umsebenzi R & D wanikel 'ingqalelo izinto ezintsha kunye nophuhliso trend zobugcisa kwimarike yamazwe ngamazwe, njengoko ngamnye iimfuno zabathengi', ekuphuhliseni entsha nendlela eliphezulu-zobugcisa non-ephothiweyo products.At langoku, R inkampani yethu ngokubanzi & inqanaba D, iye ingqanyaniswe imfuno kwimarike yamazwe ngamazwe, yaye ubanike isiqinisekiso ngamandla kuphuhliso ngamandla kwiimveliso ehamba yenkampani yethu.
Ukongezelela ekubeni abasebenzi eliphezulu-zobugcisa sele kuphuhliso loshishino, inkampani yethu yenye oovulindlela kushishino non-ephothiweyo elifake isicelo inani iimveliso eqinisekisiwe kunye nezinto ezintsha. Inkampani yethu ithobela-bulumko undoqo "lobungcali, ingqibelelo kunye ezintsha" kwaye injongo nolawulo "ukunyaniseka, umgangatho kuqala, umthengi kuqala". Siza kuqhubeka ukuphonononga ngenkuthalo, siqhubeke phezulu, kunye nokuququzelela ukudala "win-win 'ikamva eliqaqambileyo kunye nawe!